JoinCoin စျေး - အွန်လိုင်း J ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို JoinCoin (J)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ JoinCoin (J) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ JoinCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
J – JoinCoin
Market ကဦးထုပ်: $2 938.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ JoinCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
JoinCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
JoinCoinJ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.669JoinCoinJ သို့ ယူရိုEUR€0.571JoinCoinJ သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.514JoinCoinJ သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.615JoinCoinJ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr6.05JoinCoinJ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.4.25JoinCoinJ သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč14.95JoinCoinJ သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł2.52JoinCoinJ သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.893JoinCoinJ သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.94JoinCoinJ သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$15.04JoinCoinJ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$5.19JoinCoinJ သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$3.6JoinCoinJ သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹50.01JoinCoinJ သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.113.36JoinCoinJ သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.92JoinCoinJ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$1.02JoinCoinJ သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿20.85JoinCoinJ သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥4.66JoinCoinJ သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥71.43JoinCoinJ သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩793.98JoinCoinJ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦259.86JoinCoinJ သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽49.04JoinCoinJ သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴18.55
JoinCoinJ သို့ BitcoinBTC0.00006 JoinCoinJ သို့ EthereumETH0.00178 JoinCoinJ သို့ LitecoinLTC0.0125 JoinCoinJ သို့ DigitalCashDASH0.00777 JoinCoinJ သို့ MoneroXMR0.0078 JoinCoinJ သို့ NxtNXT54.37 JoinCoinJ သို့ Ethereum ClassicETC0.1 JoinCoinJ သို့ DogecoinDOGE199.99 JoinCoinJ သို့ ZCashZEC0.00858 JoinCoinJ သို့ BitsharesBTS26.1 JoinCoinJ သို့ DigiByteDGB22.27 JoinCoinJ သို့ RippleXRP2.4 JoinCoinJ သို့ BitcoinDarkBTCD0.0236 JoinCoinJ သို့ PeerCoinPPC2.26 JoinCoinJ သို့ CraigsCoinCRAIG311.91 JoinCoinJ သို့ BitstakeXBS29.2 JoinCoinJ သို့ PayCoinXPY11.95 JoinCoinJ သို့ ProsperCoinPRC85.89 JoinCoinJ သို့ YbCoinYBC0.000368 JoinCoinJ သို့ DarkKushDANK219.45 JoinCoinJ သို့ GiveCoinGIVE1481.24 JoinCoinJ သို့ KoboCoinKOBO155.93 JoinCoinJ သို့ DarkTokenDT0.617 JoinCoinJ သို့ CETUS CoinCETI1975.07